XOG: Maanta Oo Kale Afar Sanadood Ka Hor Jurgen Klopp Ayaa Liverpool Loo Magacabay, Isbarbar Dhiga Shaxdiisii Ugu Horaysay Iyo Kulankii Ugu Danbeeyay Iyo Hal Xidig Oo Nasiib Layaableh Yeeshay. - Gool24.Net
XOG: Maanta Oo Kale Afar Sanadood Ka Hor Jurgen Klopp Ayaa Liverpool Loo Magacabay, Isbarbar Dhiga Shaxdiisii Ugu Horaysay Iyo Kulankii Ugu Danbeeyay Iyo Hal Xidig Oo Nasiib Layaableh Yeeshay.
Maanta oo kale afar sanadood ka hor waxay maamulka kooxda Liverpool shaqada tababaranimo ee kooxda kowaad ay u magacaabeen Jurgen Klopp kadib markii shaqada laga caydhiyay Brendan Rodgers oo hadda Liecester City macalin u ah.
Waxa uu Jurgen Klopp shirkiisii jaraa’id ee ugu horeeyay ee Liverpool uu ku balan qaaday in muddo afar sanadood gudahood uu kooxda koobab ugu hogaamin doono wuxuuna markaas sheegay in ayna muddo 20 sanadood ah koob la’aan iskaga jiri karin.
Laakiin waxa uu hadda Jurgen Klopp si buuxda ugu qanci karaa shaqadii uu soo qabtay afartii sanadood ee uu Liverpool joogay iyo waliba sida uu balantii uu warbaahinta ka hor qaaday u fuliyay.
Waxa uu markaas sheegay in afar sanadood gudood ay ugu yaraan hal koob ku guulaysan doonaan, wuxuuna Reds ka soo caawiyay koobka Champions League iyo UEFA Super Cup.
Laakiin arinta xiisaha leh ayaa ah in shaxdii ugu horaysay ee uu Klopp ku soo safay Liverpool uu hadda hal ciyaartoy oo kaliya kaga soo bilawday kulankii ugu danbeeyay ee Leicester City.
James Milner ayaa ahaa xidiga kaliya ee shaxdii Jurgen Klopp uu kulankiisii ugu horeeyay ee Liverpool uu ku soo bilaabay isla markaana kulankii ugu danbeeyay ee Liecester City isla shaxda Klopp ku soo baxay.
Laakiin 10 kii xidig ee kale ee maalintii Klopp uu bilawday shaqada Liverpool shaxdiisa ku jiray ayay inta ugu badani kooxda ka baxeen iyada oo Origi, Lallana iyo Cyle ay yihiin saddexda xidig ee shaxdii ugu horaysay ee klopp ku jiray ee iyaguna wali kooxda baaqi ku sii ah.
Laakiin shaxdii kulankii ugu danbeeyay ee Klopp uu safay Liverpool waxay 10 ka mid ahi ahaayeen kuwo aan xataa Liverpool joogin markii uu kooxda la wareegay.
Haddaba halkan ayaanu idiinku haynaa shaxdii kulankii ugu horaysay ee Liverpool uu Jurgen Klopp soo safay ee kulankii Tottenham iyo shaxdii kulankii ugu danbeeyay ee Liecester City.
Adiga ayaa farqiga tayo ahaan u dhexeeya dareemi kara iyo waliba qaabka uu Klopp u badalay xaaladii ciyaartoyda kooxda Liverpool ee sanad guurada afraad ee ka soo wareegtay maalintii Klopp la magacaabay
Shaxdii Ugu Horaysay ee uu Klopp Ku Soo Safay Liverpool Kulankii Tottenham.
Shaxdii ugu Danbaysay Ee Uu Klopp Kooxdiisa Liverpool ku soo safay kulankii Leicester City
Gabi ahaanba waxa uu Jurgen Klopp badalay qaab fikirikii iyo kalsoonidii ciyaartoyda kooxda Liverpool, wuxuuna ka dhigay koox ku dhawaatay in ay ilawdo waxa ay guuldaradu tahay.
Liverpool ayaa hal kulan oo kaliya soo guuldaraysatay 44 kii kulan ee ugu danbeeyay Premier league waana arin layaab ku leh sidii ay xaalada Liverpool ahayd markii uu shaqada kooxda qabtay afar sanadood ka hor.
Waxay Liverpool ku jirtaa 17 guulood oo xidhiidh ah oo Premier League ah waxayna hadda qarka u saaran yihiin in ay jabiyaan rekoodhka abid ugu fiican ee ay Man City ku haysato 18 guulood oo xidhiidh ah.
Jamaahiirta Liverpool ayaa doonaya in Jurgen Klopp uu kooxda joogo inta ka hadhsan waayihiisa tababarnimo oo dhan, wuxuuna macalinka reer Germany ku raaxaysanayaa isfahanka layaabka leh ee uu la yeeshay jamaahiirta Anfield.